Iiresiphi zokutya okupholileyo
Kutheni le nto intlanzi yam eqhotsiweyo ingekho crispy?
Ubuqhetseba bokufumana okulungileyo kukuhambelana kwe-batter. … Ukuba ibhiti yakho yentlanzi ayikhriskhi ngokwaneleyo xa iphekiwe zama ukucutha intlama ngolwelo oluthe kratya. Ukufudumeza ioyile kwangaphambili kubushushu obufanelekileyo nako kubaluleke kakhulu okanye intlanzi iyakufunxa kakhulu ioyile ngelixa ipheka. …
Impendulo eKhawulezayo: Ungagcina ixesha elingakanani itswele eliqhotsiweyo?
Ukugcinwa ngokufanelekileyo, i-anyanisi ephekiweyo iya kuhlala iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 efrijini. I-anyanisi ephekiweyo inokushiywa ixesha elingakanani kwiqondo lokushisa? Iintsholongwane zikhula ngokukhawuleza kumaqondo obushushu aphakathi kwe-40 °F kunye ne-140 °F; i-anyanisi ephekiweyo kufuneka ilahlwe ukuba ishiywe ngaphandle kweeyure ezingaphezu kwe-2 kwiqondo lokushisa. Kuya kude kube nini...
Ngaba uyakwazi ukuqhotsa ishrimps yebhabhathane emkhenkceni?
Yongeza i-shrimp efriziwe kwi-tray ye-fryer okanye ibhasikidi. Ukuba wenza i-butterfly shrimp qiniseka ukuba ikuluhlu olunye. Pheka kwi-Air Fryer kwi-390 imizuzu eyi-10. Khonza njengoko ufuna. Ngaba ndingabeka i-shrimp ekhenkcezisiweyo kwisikhenkcisi somoya? Ukuba usebenzisa i-shrimp ekhenkcezisiweyo ekrwada, zibeke zonke…
Ungayisebenzisa iFrylight ukuba uqhotse iqanda?
Fafaza ipani yokuqhotsa ngeFrylight kwaye ubeke phezu kobushushu obuphakathi. Lindela de i-Frylight icace, amaqanda aqhekeze epanini kwaye upheke ngokuthanda kwakho. Khonzani nonke kunye kwaye niyonwabele. Ungaqhotsa iqanda ngeoyile yokutshiza? Tshiza i-skillet encinci ye-non-stick ngesitshizi sokupheka. Fudumeza i-skillet phezu kobushushu obuphakathi. Yaphula amaqanda kwi...
Ubuzile: Ngaba unokufudumeza i-stir fry?
Isitovu yenye inketho enkulu yokufudumeza isitya se-stir-fry okanye nayiphi na imifuno ehlutshiweyo. Yongeza ioli kwaye uphinde ufudumeze ukutya kwindawo ephantsi ukuya kubushushu obuphakathi ukuze ugweme ukupheka. Ngokuqinisekileyo uya kufuna ukushukumisa rhoqo ukufudumeza. Ngaba uyakwazi ukufudumala i-stir-fry kwi-microwave? Ngokutsho koZimeleyo kunye noLwazi lokutya lwaseYurophu…
Zingaphi izihlandlo onokuyisebenzisa ngayo ioyile yemifuno ukucoca okunzulu?
Iingcebiso zethu: Ngokutya okugayiweyo kunye nokutya okugayiweyo, phinda usebenzise ioli kathathu okanye kane. Ngezinto zokuqhotsa ezicocekileyo ezifana neetshiphusi zetapile, kulungile ukuba uphinde usebenzise ioyile ubuncinci amaxesha asibhozo-kwaye mhlawumbi ixesha elide, ngakumbi ukuba uyayizalisa ngeoli entsha. Ndingayisebenzisa kwakhona i-oyile yemifuno emva kokuqhotsa nzulu? Ewe, ungaphinda uyisebenzise. Kodwa…
Uzigcina njani iitumato eziluhlaza eziqhotsiweyo?
Uzigcina njani iitumato eziluhlaza eziqhotsiweyo zingabi mbi? Uzigcina njani iitumato eziluhlaza eziqhotsiweyo ezishiyekileyo? Emva kokuba ziqhotyiswe, ndincoma ukutya iitumato ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ukuba ugqiba ukutya okushiyekileyo ungazigcina efrijini ukuya kwiintsuku ezintathu. Ukufudumeza kwakhona, beka i-oiled skillet ngaphezulu kwephakathi ...
Eyona mpendulo: Ngaba ibhekoni enganyangwanga ifuna ukuphekwa?
Inyaniso kukuba, yonke i-bacon kufuneka inyangwe ngaphambi kokuba isetyenziswe. Ngelixa ibhekoni enganyangwanga isanyangwa, idlula kwinkqubo eyahluke kakhulu. Inkqubo engcono kuwe kwaye inencasa ngakumbi! Ukubeka nje, i-bacon enganyangekiyo yibhekoni engakhange inyangwe nge-nitrate kunye ne-nitrites eyenziwe ngokwenziwa. Ngaba ibhekhoni enganyangwanga iphekiwe? I…
Ngaba unokugula ngenxa yeefry zaseFrance ezingaphekwanga?
Ngaba kulungile ukutya iifries ezingavuthwanga? Iitapile ezingaphekwanga ngokwaneleyo azikho luhlaza ngokupheleleyo. Ziitapile ezinesitatshi sazo uninzi lwazo lwaphulwa, kodwa hayi ngokupheleleyo. Oku kubenza bakhuseleke kunamazambane akrwada, kodwa angakhuselekanga ngokupheleleyo. Sekunjalo, azilunganga njengeitapile eziphekwe ngokupheleleyo. Ngaba unokugula ngenxa yeefries zasefrentshi ezingaphekwanga ngokwaneleyo? Ukuba…
Uyipheka njani ipizza ephekwe ngesiqingatha?
Ndingayipheka njani ipizza ephekwe kancinci? Isiqingatha sokupheka kwePizza Imiyalelo yokupheka Preheat oven ukuya kwi-400-425 degrees. Beka i-pizza engasongwanga kwi-oveni kwaye upheke malunga nemizuzu eyi-8-12. I-pizza kufuneka yenziwe xa i-cheese ijika i-golden brown. Uyifudumeza njani ipizza ephekwe ngesiqingatha? Phinda ufudumeze iPizza kwi-Oven Preheat the…
Page1 Page2 ... Page883 Okulandelayo →
Molweni nonke! NdinguNinel kwaye ndicinga ukuba abantu abathanda ukupheka, hayi ukuqhotsa, ukubilisa kunye nomphunga ngamaxesha ngamaxesha, abanakuphila ngaphandle kokutya okumnandi. Kodwa njani ukulungiselela ngokufanelekileyo izitya ezimnandi ukuze zibe sempilweni? Zininzi iindlela zokupheka kwi-intanethi, kodwa ndifuna ukwabelana nawe ezimbalwa.
© 2022 Iiresiphi zokupheka